Fodiana indostrialy: Mamerina orinasa, fianarana ary fifandraisana i IMEX America
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Fodiana indostrialy: Mamerina orinasa, fianarana ary fifandraisana i IMEX America
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Etazonia Vaovao Vaovao
Amin'izay nantsoina hoe "mody" ho an'ny indostrian'ny hetsika manerantany dia hatao ny 9-11 Novambra any Las Vegas ny IMEX America. Ny trano famoahana andiany faha-10 dia manana trano vaovao, Mandalay Bay, ary kasaina hanomezana fahafaha-manao asa aman-draharaha, programa mianatra manaitaitra ary hetsika ara-tsosialy mampihetsi-po, ao anatin'ny tontolo azo antoka nefa tsy mandoza.
Ireo mpividy dia afaka mihaona amin'ireo mpamatsy izay mandany ny seha-pihariana rehetra ao amin'ity hetsika ity.
Ny tanjona mandray anjara hatreto dia ao Aostralia, Korea, Singapore, Dubai, Italia, Boston, Atlanta, Hawaii, Switzerland, ary Panama.
Ny vondrona hotely hatreto dia hisolo tena an'i Radisson, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group, ary Associated Luxury Hotels International.
Ny seho an-tsehatra dia toy ny mahazatra hatrany, ny orinasa sy ny mpividy afaka hihaona amin'ny mpamatsy mivelatra amin'ny sehatra rehetra amin'ny indostria. Anisan'izany ireo toerana itodiana Aostralia, Korea, Singapore, Dubai, Italia, Boston, Atlanta, Hawaii, Suisse ary Panama ary koa vondrona hotely Radisson, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group ary Associated Luxury Hotels International. Argentina, Canada, Puerto Rico, Detroit, Memphis, Baltimore ary Loews Hotels dia isan'ireo mpampiranty izay nanitatra ny fisian'izy ireo tamin'ilay fampisehoana.
Diversité, dihy & fanabeazana amin'ny sehatra natokana
Ny programa fianarana manome aingam-panahy sy maimaim-poana izay mandeha mandritra ny fampisehoana dia tsy tokony hohadinoina, ary manomboka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, tanterahina ny 8 Novambra, iray andro alohan'ny hanombohan'ny IMEX America. Dr Shimi Kang avy amin'ny University of British Columbia dia hanome ny fehezanteny Smart Monday, mampiseho ny fomba fiasa farany miorina amin'ny fikarohana, fanavaozana, fiaraha-miasa ary fahombiazan'ny orinasa maharitra.
Fotoam-pivoriana natokana ho an'ny vondrona indostrialy isan-karazany dia ahafahan'ny mpanatrika manokana ny traikefany tamin'ny Alatsinainy Smart. Misy ny fanabeazana sy ny tambajotra natokana ho an'ny mpitantana orinasa ao amin'ny Forum Forum Fihaonambe - natao ho an'ny mpitantana orinasa ambony indrindra avy amin'ny orinasa Fortune 2000 - ary ny Fokusan'ny orinasa vaovao - misokatra ho an'ny drafitra rehetra avy amin'ny orinasa amin'ny ambaratonga rehetra. Ny mpandray anjara dia afaka manantena dinika lalindalina momba ny lohahevitra toy ny famolavolana fihaonana, fifandraisana mahomby amin'ny mpiasa ekipa lavitra, ary fahasalamana ara-tsaina sy fahasalamana.
Carina Bauer sy Ray Bloom
Ireo mpitarika ny fikambanana dia afaka mifandray sy mianatra amin'ny namany ao amin'ny Association Leadership Forum, noforonin'ny ASAE. Amin'ny endrika atrikasa vaovao ho an'ny 2021, ny Forum dia mijery mivantana ny toetr'andro niova orinasa izay iasan'ny fikambanana ankehitriny. Ny Forum dia hizaha ny fomba hiatrehana ireo fanovana ifotoran'ny areti-mifindra, izany hoe ny andrasan'ny mpikambana avo kokoa, ny fitomboan'ny fahasamihafana ao amin'ny mpikambana, ny soatoavina isan-karazany ary ny fandrosoana haingana amin'ny haitao.
Tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa handresena ny fahasamihafana eo amin'ny sehatry ny hetsika orinasa ary manao izany i She Means Business. Ny hetsika iraisan'ny magazine IMEX sy TW, tohanan'ny MPI, dia mivondrona vondrona vehivavy mpitarika avy ao anatiny sy ivelan'ny indostria hizara ny tantaran'izy ireo sy ny torohevitr'izy ireo. Ambition, action and accountability: Fametrahana tanjona stratejika ho an'ny vehivavy amin'ny hetsika dia fivoriana azo ampiharina miaraka amin'ny torohevitra momba ny fomba hahatratrarana “vina lehibe”, natolotr'i Juliet Tripp, Lehiben'ny lefitry ny hetsika global, Chemical Watch. Michelle Mason, filoha ary CEO, ASAE ary consultant Courtney Stanley, Courtney Stanley Consulting dia nanasa lehilahy roa hanatevin-daharana ny dinika isan-karazany ao amin'ny Ny fahasamihafana sy ny fitovian'ny miralenta - Ny vehivavy dia mitady resaka amin'ny lehilahy.
Ny andro tsirairay dia manomboka amin'ny fehezanteny MPI. Movers sy shakers avy any ivelan'ny indostrian'ny hetsika orinasa dia samy hitondra ny fahitany an'izao tontolo izao tsy manam-paharoa amin'ny fampisehoana - manantena dokotera nahazo fiofanana Harvard nahazo loka, iray amin'ireo "mpanoratra malaza indrindra eran'izao tontolo izao" miampy ny mpanorina ny hetsika dihy manerantany ary fiarahamonina.
Ny Inspiration Hub dia trano an-tsehatra indray haneho fanabeazana amin'ny gorodona, manome fotoana voafetra ho an'ny fotoana ianarana miresaka ny filan'ny orinasa amin'ny faran'ny taona 2021. Ireo Sesiasa dia manarona ny Famoronana amin'ny fifandraisana; Ny fahasamihafana sy ny fahazoana miditra; Fanavaozana sy teknolojia; Fanarenana orinasa, fifampiraharahana momba ny fifanarahana, marika manokana, ary fitohanana.
Mampientanentana sy tsy ampoizina ny hetsika ara-tsosialy
Na dia mijanona ho foiben'ny orinasa sy fianarana aza ny seho, dia misy ihany koa ny fotoana maro ahafahana mifandray ivelan'ny seho fampisehoana. Ny fitsangatsanganana Lip-Smacking Foodie dia manome ny fihenan'ny Las Vegas miaraka amin'ny sakafo tsara indrindra eto amin'ny Strip. Ny fitsangatsanganana hafa dia manolotra ny làlana anatiny amin'ny toerana roa mampiavaka azy: ny lapan'i Kaisara sy ny Helodrano Mandalay.
Mystery Trip dia hariva tsy ampoizina misy traikefa tsy manam-paharoa, toerana mahafinaritra, sakafo mahafinaritra ary orinasa lehibe. “Raharaha toerana tsy fantatra io. Atao ao anaty haizina ny olona mandra-pahatongan'ny fotoana farany - ary eo no mitranga ny majia! ” manazava ny Lehiben'ny tompon'andraikitra miafina Dave Green. Misy ihany koa ny fankalazana mety amin'ny hetsika indostrialy mahafinaritra SITE Nite Amerika Avaratra sy MPI Foundation Rendezvous.
“Tsy afaka miandry ny hahita ny fiverenan'i IMEX America izahay ary hampivondrona ny vondrom-piarahamonina misy anay. Ho an'ny maro ao amin'ny indostria, ny seho dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanarenana ny orinasan-dry zareo ary maneho fotoana tokana hihaonana amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miasa izay tsy hitany tao anatin'ny roa taona latsaka », hoy ny fanazavan'i Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX.
“Nanamboatra seho tamim-pitandremana izahay izay manana orinasam-pinoana ary koa manome toky fa hanome tolotra hetsika ho an'ny tsena sahaza ho an'ny fotoana izahay; miasa daholo isika rehetra. Afaka matoky ny mpanatrika fa nanao fampisehoana azo antoka izahay izay mahafeno ny fepetra farany ilaina amin'ny fahasalamana sy fiarovana, miasa akaiky amin'ny tanàna nampiantrano anay sy ny toerana vaovao Mandalay Bay. "
Ny IMEX America dia atao ny 9 - 11 Novambra any Mandalay Bay any Las Vegas miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 8 Novambra. Raha hisoratra anarana - maimaimpoana, kitiho Eto. Raha mila tsipiriany misimisy momba ny safidin'ny trano hipetrahana sy ny famandrihana dia kitiho Eto.
Kitiho ny vaovao farany momba ny fampisehoana Eto. Henoy ny talen'ny IMEX, Ray Bloom ary ny CEO, Carina Bauer, miresaka momba ny drafitra ho an'ny IMEX America, ny fangatahana tsena mihoampampana, ny fampirantiana ary ny zanabola amin'ny mpividy farany Resadresaka nifanaovana tamin'i Carina.